February 14, 2021 - Babal Khabar
Feb142021 by बबाल खबरNo Comments
भिड ठुलो देखाउने नि’हुँमा भ’ड्कि’लो खर्च, एक बस मान्छे ओसारेको यति सम्म तिर्ने रहेछन् !
काठमाडौं । ‘अहिले देख्दा भ्रष्टा'चार रोकिँदैन, एउटा वडाध्यक्षको चुनाव लड्न एक करोड ख'र्च गर्नुपर्ने अवस्था छ, अनि कसरी रोकिन्छ भ्रष्टाचार’, यी भनाई पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दका हुन् । चन्दकै भनाई जस्तै जस्तै छ नेपालको राजनीति र निर्वाचन । प्र'तिनिधिसभा वि'घ'टनपछि नेपालको राजनीतिक एकाएक तातेको छ । दलहरुले दैनिक जसो 'प्रर्दश'न र शक्ति देखाउने काम गरिरहेका छन् । निर्वाचनमा समेत चर्को लगानी गरेका दलहरु पछिल्लो पटकका प्रर्द शनमा पनि निक्कै चर्को ख र्च गर्नुपर्ने तथ्यहरुले देखाउछ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुवै पक्षले राजधानी सहित देशका विभिन्न भागमा पटक पटक शक्ति प्रर्दशन गरेका छन् । तर, शक्ति प्रर्दशनका लागि कति खर्च भयो भनेर कुनै पनि दलले सार्वजनिक गरेका छैनन् । सरकारमा रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समुहको नेकपा वा पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल नेतृत
वृद्धाभत्ता छिट्टै मासिक पाँच हजार पुर्याउने उपप्रधानमन्त्रीको घोषणा !
ओखलढुङ्गा – उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले वृद्धाभत्ता मासिक रु पाँच हजार पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन् । चिशङ्खुगढीमा नेपाल कम्यु'निष्ट पार्टी (नेकपा) को जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले अघिल्लो निर्वाचनमा वाचा गरेअनुसार वृद्धाभत्ता मासिक रु पाँच हजार दिने बताएका हुन् । गत आर्थिक वर्षबाटै सामाजिक सुर'क्षा भत्तामा बढावा दिने तयारी गरिए पनि पार्टीभित्रको एउटा समूहले वि'रोध जनाएका कारण त्यो सम्भव नभएको भन्दै उनले आगामी दिनमा सरकारले लक्ष्यअनुसार काम गर्ने उल्लेख गरे। पोखरेलले काम गर्न नदिएर सरकारलाई अस'फल बनाउने र मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने प्रयास गरेकाले ताजा जनादेशमा जानु परेको बताए। विकास र समृद्धिका अभियान निरन्तर अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो । उनले अघिल्लो निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री ओलीको हस्ताक्षरबाट उम्मेदवारी सिफारिस भएको स्मरण गर्दै विगतदेखि नै पार्टीको नेतृ
खाना खाइसक्ने बितिकै नगर्नुस् यी कार्यहरु,नत्र यस्तो सम्म हुन सक्छ !
सामान्यतय हामी सबैले दैनिक खाने खानामा सानो ला'परवा'ही भयो भने पनि त्यसले प्रत्यक्ष असर पार्ने र पाचन प्रक्रिया गडबडि हुने गर्दछ। त्यसैले सर्वप्रथम खाने कुरामा ध्यान दिनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ । हामीले नियमित रुपमा सन्तुलन मिलाएर खाने खानाले मात्र शरिर स्वस्थ रहन सक्दैन। खाना खाईसकेपछि हामीले कस्ता कामहरु गर्छौँ भन्नेमा पनि निर्वर रहने गर्छ। खानाको पुरा फाइदा हामीलाई तब मिल्छ जब पाचन सहि तरिकाले भैरहेको हुनेछ र खानाको सम्पूर्ण पोषण तत्व हाम्रो शरीरले प्राप्त गर्छ । आज हामी तपाईहरुलाई खाना खाई सकेपछि तुरुन्त गर्न नहुने केही कामहरुको बारेमा बताउन जाँदै छौँ जसलाई तपाईलाई स्वस्थ रहन मद्धत पुग्नेछ। १. धुम्र'पान गर्नु : यदि तपाई धुम्र'पान गर्नुहुन्छ भने खान खाइ सकेपछि तुरुन्त गर्नु हुँदैन किनकि यसले क्या'न्सर र मुटु रो'को ख'तरा दुई गुणा बढाउने गर्छ। ' २. चिया पिउनु : खाना खाएपछि तुरुन
किन जवा’नीमै खुइलिन्छ पुरुषहरुको ता’लु ? हरेक पुरुषले जान्नै पर्ने कारण यस्तो रहेछ !
एजेन्सी, अधिकांश पुरुषहरुमा कपाल झर्ने सम'स्या अर्थात् तालु खु'इलिने स'स्या हुने गरेको छ । तालु कसरी हुन्छ प्राय मानिसहरुलाई थाहा नहुन सक्छ। कपाल झरेर तालु हुदा हरेक मानिसहरु चिन्ति'त हुने गर्दछन। तर तालु कसरी हुन्छ यो बारे जान्न कोहि पनि इच्छुक हुदैनन्। आज हामी तपाइलाई यसबारे जानकारी दिनेछौ। पुरुषको तालु यसकारण छिटो खु'इलिन्छ: – अत्यधिक त'नावका कारण पनि पुरुषहरुको कपाल झर्ने गर्दछ । त'नाव बढदा शरीरको हर्मो'न्सको व्या'लेन्स विग्रन्छ जसले गर्दा कपाल झर्न गर्दछ। – कपालमा विभिन्न किसिमका कस्मेटिक सामान जस्तै : हेयर जेल, कलर्स , शैम्फू, कन्डिशनर जस्ता पदार्थको प्रयोग गर्दा कपालमा साइड इफेक्ट भई कपालझर्ने गर्दछ । – यदी टाउकोमा फं'गल इ'क्सन भयो अथवा चायाँ पर्ने सम'स्या देखियो भने पनि कपाल अ'धिक मात्रामा झर्न सक्छ। – यदी तपाइले चु'रोट 'सेवन गर्नुहुन्छ भने त्यसमा हुने नि'कोटिनको
बुटवलमा अक्सिजनको चरम अभाव पछि सिमरा र चितवनबाट हेलिकोप्टरमा ल्याइयो अक्सिजन
कोरोना अवस्था भयावह-नेपाल चिकित्सक संघ देश भर ‘रेड अलर्ट’ घोषणा गर्न अपिल
उपत्यका भित्रका अस्पताललाई अक्सिजन सिलिण्डरको कोटा तोकियो, कुनलाई कति ? सूची सहित